Pyae Phyo (MMiTD): ♪ August လအတွက် - hp Laptop တွေကို Discount ချနေပါပြီ ♫
♪ August လအတွက် - hp Laptop တွေကို Discount ချနေပါပြီ ♫
➡️ 5.8.2017 ➡️ 30.8.2017
😳 20US မှ 40US အထိ HP Discount
😍10US မှ 30US အထိ Eastern Discount
(y) လက်ငင်း...အရစ်ကျ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်
(y) AEON နဲ့ Installment ၀ယ်နိုင်သလို, AYA/CB /KBZ Credit Cardများနှင့်လည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(1) HP Paviliion 14-am006TU
500GB HDD , 4GB DDR3
DVD R/W, 14'' LED
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး 295US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 285US (387,000Ks)
အိမ်သုံး / ရုံးသုံး Word / Excel / Power Point/ internet / Email / နဲ့ DVD RW ပါဝင်တာမို့ DVD ခွေများကို ကြည့်ရှုလို့ရရုံသာမက ခွေအနေနဲ့လည်း ပြန်လည်ကူးဖို့အတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
(2) HP X360 11-ab028(Touch Screen)
500GB HDD, 4GB DDR3
WiFi,Webcam,BT,2 Cell Battery.
Window 10 License.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (449US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 439US (597,000Ks)
Touch Screen နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးချင်သူများအတွက် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမယ့် ၁၁ လက်မအ၇ွယ် Laptop လေးပါပဲ။ Word / Excel /Power Point / internet / Email စတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
(3) HP Pavilion 14-am093TU
500GB HDD, 4GB DDR4, DVD RW
14'' LED , HP Webcam, WiFi, BT
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (399US)
Cash Back (20US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 369US (501,000Ks)
i3 ကိုသုံးချင်တယ်။ Graphic Card ပါဖို့မလိုသူများရွေးချယ်သင့်တဲ့
model လေးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သုံးရုံးသုံးအတွက် မြန်ဆန်ပြီး ဈေးနှုန်းသင့်လျော်တဲ့ Laptop လေးပါ။
(4) HP Pavilion 14-am112TX
AMD R5M 330 2GB Graphic
WiFi, WebCam, BT,4Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (499US)
Cash Back (25US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 464US (631,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် 7th Gen Cpu ကိုအသုံးပြုထားပြီး 2GB Graphic လဲပါဝင်တာမို့ Dota2 Game နဲ့အခြား 3D Gameနဲ့ AutoCad သုံးချင်သူများအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Laptop လေးပါ။
(5) HP 15-ay119TX
1TB HDD / 4GB DDR4/ DVD RW
AMD R5M 430 2GB
15.6'' LED / WiFi / WebCam / BT
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (509US)
Cash Back (30US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 469US (637,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် 7th Gen Cpu ကိုအသုံးပြုထားပြီး 2GB Graphic လဲပါဝင်တာမို့ Dota2 Game နဲ့အခြား 3D Gameနဲ့ AutoCad သုံးချင်သူများအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Laptop လေးပါ။ အ၇ွှယ်အစားကလဲ 15.6'' အရွှယ်အစားမို့ Screen ကြီးကြီးကြိုက်သူတွေသဘောကျမှာပါ။
(6) HP Pavilion 15-au169TX
1TB HDD, 4GB DDR4 / DVD RW
2 Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (560US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 540US (734,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် ကိုလည်းသုံးချင်တယ် Screen အရွယ်အစားကြီးတာကိုလည်းနှစ်သက်သူများအတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Laptop ပါပဲ။ Nvidia 2G Graphicပါဝင်တာမို့လည်း 3D Game တွေနဲ့ AutoCad လို Software တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမယ့် Laptop လေးဖြစ်ပါတယ်။
(7) HP Pavilion 14-am113TX
1TB HDD/ 4GB DDR4 / DVD RW,
WiFi, WebCam, BT
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (569US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 549US (746,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် 7th Gen Cpu နဲ့ 2GB Graphic ပါဝင်ပြီး အရွယ်အစားကလဲ14'' သာရှိတာမို့ performance ကောင်းကောင်း နဲ့သယ်ရလွယ်တဲ့
Laptop လေးဖြစ်ပါတယ်။ 3D Game , AutoCad ,3D Max အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Laptop လေးပါပဲ။
(8) HP Pavilioin 15-au173TX
1TB HDD/ 4GB DDR4/ DVD RW
Nvidia GT940 2GB Graphic
15.6'' Bright View LED
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (749US)
Cash Back (40US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 699US (950,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i7 7th Gen Cpu ကိုအသုံးပြုထားပြီး Graphic 2GB ပါဝင်တာမို့ AutoCaD, 3D Max , Revit , Sketch up စတဲ့ software များနဲ့ Game ဆော့ချင်သူများအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(9) HP Pavilion 15-au172TX
1TB , 8GB DDR4 / DVD RW
15.6'' LED , WebCam, WiFi
BT,2Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (825US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 805US (1094,000Ks)
သည် Laptop လေးကတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Laptop လေးပါပဲ.။
အိမ်သုံး၊လုပ်ငန်းသုံး၊ သုံးချင်ရာသုံးအတွက် အမြင့်မားဆုံး Performance
ရရှိစေမယ့် Laptop လေးလို့ပဲညွှန်းပါရစေ။
(10) HP Spectre 13-V114tu
512GB SSD , 8GB DDR3
13.3'' LED,4Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (1799US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 1769US(2405,000Ks)
HP ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် Spectre Laptop လေးပါပဲ.။ ဈေးနှုန်းကကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် သည်Laptop လေးကိုကိုင်ထားလိုက်တာနဲ့ ချမ်းသာကြွမ်ဝခြင်း...style ကျခြင်း..အလုပ်လုပ်ရာမှာပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားတွေကို ခံစား၇မှာပါ။
(**** မြန်မာငွေဈေးများသည် လက်ရှိပေါက်စေျးဖြင့် တွက်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး
နေ့ စဉ် ဒေါ်လာ ပေါက်ဈေး အတက်အကျ တိုင်း ရောင်းချပေးပါသည်။ ***** )
ကျောက်တံတားမြို့ နယ်။ ဖုန်း 01-398491, 09-782569031, 09-977921751